Hurumende inoti munyika hamuna dambudziko rekutyorwa kwedzokero dzevanhu ichi vanoti pane dambudziko iri ndevaya vasingazive zviri kuitika munyika pamwe nevanopikisa hurumende neshamwari dzavo dziri kunze kwenyika. Asi mapato anopikisa nemasangano anorwira kodzero dzevanhu anoti pane humbowo hwakawandisa hunoratidza kuti hurumende iri kutyora kodzeo dzevanhu.
Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko, VaNick Mangwana, vati manyepo kuti munyika mune dambudziko rekutyorwa kwekodzeo dzevanhu vachiti mashoko aya ari kubva kuvavengi veZimbabwe vanozivikanwa mukati nekunze kwenyika.
Vati hurumende iri kuchengetedza runyararo munyika nekudzivirira kupararira kweCovid-19.
VaMangwana vati hurumende haisi kuzorega vanhu vachiratidzira panguva ino yeCovid-19 kuti vaparadzire chirwere sezvainge zvarongwa svondo rapfuura.
Vati vanhu vari kutaurisa pamusoro peZimbabwe ngavanyarare vachiti kunyika dzakaita seIndia neSouth Africa kwakatofa vanhu vakawanda hurumende dzeko dzichiedza kudzivirira kupararira kweCovid.
VaMangwana vati dzimwe nyika dzepasi rese dzapindira kutaura zvisina maturo pamusoro peZimbabwe nekuti zvizvarwa zveZimbabwe ndizvo zvakatanga kurova bembera zvichitaura manyepo pamusoro penyika yazvo.
Asi mumwe mugari wemuHarare, VaOwen Dhliwayo, vaudza Studio 7 ichokwadi kuti mauto nemapurisa ari kurova, kutora zvinhu zvevanhu pamwe netyora kodzero dzavo achivanda nekuti ari kudzivirira kupararira kweCovid.
Mumwe wevatevedzeri vemutungamiriri weMDC Alliance, VaTendai Biti, vati hapana munhu angataura kuti munyika hamuna mhirizhonga ivo vanhu vari kusungwa, kubhinywa, kurohwa pasina chikonzero zuva zuva.
Hon Tendai Biti At Parliament
VaBiti vatiwo veruzhinji vane humbowo hwekutyorwa kuri kuitwa kodzero nehurumende uhwo vari kutora vachishandisa mbozhanhare dzavo mazuva ose.
Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum, VaMusa Kika, vati mashoko ehurumende ndeekuda kuramba zvinhu zviri kuitika munyika asi vakati hazvishamisa nekuti hurumende yagara isingakoshesi kodzero dzevanhu.
Vatiwo kana makomisheni ehurumende anoti Zimbabwe Human Rights Commission neNational Peace and Reconciliation Commission akataura nguva pfupi yapfuura kuti munyika muri kuitika zvinhu zvisina kunaka panyaya yekodzero dzevanhu.
VaKika vati vana veZimbabwe vanofanira kuramba vachitaura zvichemo zvavo kudzamara hurumende yatevedza mitemo nezviga zvekuremekedza kodzero dzevanhu zvayakabvuma kutevedza pasi pemasangano eSouthern African Development Community, African Union neUnited Nations.
Vatiwo zvinofadza kuti dzimwe nyika nemasangano akasiyana siyana pasi rese vave kutoudza hurumende yeZimbabwe kuti irege kumbunyikidza vanhu.
Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights, iro riri kumirira vanhu vakawanda vari kusungwa pamwe nekurowa, rinoti vanhu vanodarika makumi matanhatu vakasungirwa kana kuroverwa nyaya ine chekuita nekuratidzira kwainge kwakarongwa kuitwa musi wa 31 Chikunguru.
Bato riri kutonga kuSouth Africa reAfrican National Congress pamwe nehurumende yenyika iyi, United Nations nevanyarikani pasi rese, vakatotaura kuti zviri kuitika muZimbabwe hazvina kunaka uye vari kuedza kutaura nehurumende yaVaMnangagwa kuti isiyane nezvairi kuita.